iinyanga 1 kunyaka 2 eyadlulayo #854 by Dariussssss
Ngesizathu esithile, isimo semozulu siphila kwi-FSX yam engalunganga. Akulunganga nje, kodwa akukho ndawo e kufuphi neyinyani, okanye echanekileyo kwezinye iindawo zeenqwelo-moya. Okwangoku, ezininzi zeenqwelo-moya zaseYurophu zijongene nokulibaziseka ngenxa yeqhwa elikhulu.
Ngempembelelo, i-EHAM Amsterdam..yinyani, imozulu yile:
Umoya 16 kt ukususela kuMntla
Ukushisa 1 ° C
Uxinzelelo 972 hPa
Amafu atyhileyo kwi-400 ft
I-Overcast kwi-700 ft
(ukukhanya) iinqabunga zekhephu
Kwi-FSX, indlela eyahlukileyo. Ubhakabhaka obucacileyo, umoya ohlukeneyo kunye nokufudumala .... yintoni isihogo? Ngaba kukho nayiphi na indlela ejikeleze kuyo?
Umsebenzisi (s) zilandelayo wathi Enkosi: luc57
I-1 unyaka we-5 iintsuku ezidlulileyo - I-1 unyaka we-5 iintsuku ezidlulileyo #941 by DRCW
Injini yemozulu yenguqu yebhokisi ye-FSX ayixhaswa nguJESPEN oninika isimo sezulu esiphilayo. Ndiya kuthatha loo nto iyenzela i-Steam Edition eyenziwe i-Dovetail inesivumelwano kunye nabo. Inkonzo ayinayo i-Dovetail. Kanye nje ngoku ngoku, i-FSW ayinayo i-injini yemozulu esebenzayo okanye umqhubi wesithathu ungayithenga enye. Indlela yodwa yokufumana imozulu yehlabathi yangempela kwi-FSX i-Boxed edition, ukuthenga enye njenge-Active Sky 2016
Uhlobo lokugqibela: 1 unyaka we-5 iintsuku ezedlule DRCW.
iinyanga 11 2 kwiiveki ezidlulileyo #1013 by baqhubi
Ndifumene inkqubo yemozulu yomsulwa - incinci kwaye ikhupha imimoya ephilayo kwiFSX - FSXWX.
Awudingi ukufaka. Qalisa inkqubo ye-FSXWX xa u-FSX.
Umsebenzisi (s) zilandelayo wathi Enkosi: DRCW
iinyanga 11 2 kwiiveki ezidlulileyo #1014 by Dariussssss
Isayithi ayikwazi ukufikelela ..... ekuguquleleni, isixhumanisi esifileyo.
iinyanga 9 3 kwiiveki ezidlulileyo #1063 by baqhubi
Hi Dariussssss. Andiqinisekanga ukuba uthetha ukuthini. Ikhonkco ibonakala iyasebenza kum ngoku.
Mhlawumbi lo, (apho ukukhutshelwa kwangoku kunokufumaneka khona) .... www.plane-pics.de/fsxwx/instructions-fsx.htm
iinyanga 9 3 kwiiveki ezidlulileyo #1064 by Welsheagle
Ikhonkco isebenza kum kodwa ndiyakucebisa www.fsrealwx.net/
Ndiyisebenzisa kwaye ikunika izimo zemozulu zangempela .. lonke ixesha.
Ungasebenzisa iinguqulelo yamahhala okanye uphucule kwipro.
Umsebenzisi (s) zilandelayo wathi Enkosi: baqhubi
Ixesha ukwenza page: 0.266 imizuzwana